Sary : MICA
Nitety tsena nanao fanaraha-maso ny fitaovam-pandajana ara-barotra ; ny fanaraha-mason’ny fisian’ny entana ilain’ny mponina andavanandro (PPN) ; ny fitsirihana ny tahirin’ny PPN ary ny fijerena ny vidin’ny entana eny an-tsena ny avy amin’ny Foiben-draharaha misahana ny Tsena Anatiny (DCI), ny Foiben-draharaha misahana ny Fiarovana ny Mpanjifa (DPC) ary ny foibem-pitondran’ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa Tanana faritra Analamanga (DRICA Analamanga) eo anivon’ny ny Ministeran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana, sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), ho fitsinjovana ny zon’ny mpanjifa. Nanomboka ny alarobia 11 novambra izao fiaraha-mientana izao, ary hitohy hatramin’ny 13 novambra ho avy izao ny fidinana eny an-tsena, ary hiitatra manerana ny Nosy ihany koa. (Jereo sary Tohiny)
Hotanterahina ny 12-13-14 novambra 2020 eny amin'ny zaridainan'Antaninarenina, ny hetsika "Tsenaben'ny Fizahantany", izay karakarain'ny Ministeran'ny Fitaterana, ny Fizahantany ary ny Famantarana ny toetr'andro (MTTM), sy ny Ofisim-pirenena misahana ny fizahantany (ONTM). Mpitsidika maherin'ny 5 000 no andrasana mandritra ny 3 andro aharetan’ny hetsika. Misandrahaka amina tranoheva miisa 17 kosa ireo matihanina amin'ny fikarakarana 32 fivahinianana mandray anjara. Ao ireo trano fandraisam-bahiny, Agences de voyages/Tour-opérateurs, mpampanofa fiara, fa indrindra ny kaompaniam-pitaterana TSARADIA. Mahatratra hatramin'ny 50% ny fihenam-bidy aroson'ireo mpikarakara fivahinianana ireo.Tanjona ny hanome vahana ireo mpandraharaha ara-dalàna sy hampahafantatra an'ireo tolotra any amin'ny faritra samihafa.
lundi, 09 novembre 2020 20:19
Mananara Avaratra: Potika ny fihariana lavanila
Nidiram-pantiantoka, dobo trosa, tsy misy mpizaha, izany ny zava-misy aty Mananara Avaratra mihatra amin'ireo mpamboly, mpiasa lavanila, mpanangom-botra, mpanondrana any ivelany izao. Zara raha misy vidiny ny amarotana ny lavanila masaka, 250 000 - 280 000ariary ny kilao lavanila masaka, raha 1 500 000 - 2 000 000ariary izany tamin'ny taon-dasa. Mitentina 80 000 - 100 000ariary anefa ny nividianana ny lavanila maitso na manta, izay mila 5Kg vao mahazo 1kg masaka. Efa 500 000ar izany ny manta, nefa mbola eo ny kojakoja, ny mpiasa, ny fitaterana. Mpandraharaha avy Antananarivo, akaikin'ny fitondrana no maro mividy, fa ireo efa mpanao lavanila, tratran'ny olona avokoa ny ankamaroany, nogiazana avokoa ny bankin'izy ireo. Teren'ny fanjakana tsy maintsy mampody vola vahiny amin'ny vidiny faritan'ny fanjakana ireo mpandraharaha rehetra, nefa tsy arak'izay ny vidin'ny lavanila amarotana azy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Misokatra androany Alarobia 04 Novambra ato amin’ny trano malalaky ny faritra Atsinanana ny « GUICHET UNIQUE ». Toy ny isan-taona dia ato no ivon-toerana ampivondronana ireo Birao rehetra tokony handalovan’ny mpikarakara taratasy rehetra :- Biraon’ny Hetra,- Biraon’ny Statistiques,- Biraon’ny Kaominina ho an’ny «droit de stationnement»,- Ireo Sampandraharahan’ny faritra mikirakira ny lafiny « ristournes ». Isan-taona dia fahombiazana tanteraka izao fikarakarana izao, satria dia manamora ny fiomanan’ireo rehetra mian-tsehatra amin’ity asa mandalo nefa iankinan’ny toe-karenan’ny kaominina sy ny faritra ary tokantrano maro eto Toamasina ity.
USA : Ho vahinin'ny Embassy Talk ny mpandraharaha Tahina Razafinjoelina ny 04 novambra amin'ny 02ora tolakandro "Ny Tanora sy ny Fandraharahana" no lohahevitra hovoaboasan'i Tahina Razafinjoelina, Talem-pitantanan'ny IT University sy ny Bureau International de Consultance en informatique, namorona ny Vondrom-barotra Vidy Varotra, ary mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'Antananarivo sy ny IT University. Andeha mivantana amin'ny facebook izany tafatafa izany ny 04 novambra 2020 amin'ny 02 ora tolakandro.
mardi, 03 novembre 2020 07:34
“Prix Epicures de l'Epicerie Fine 2020”: Nahazo ny medaly volamena ny tantely lodsia malagasy
Nahazo ny medaly volamena nandritra ny “Prix Epicures de l'Epicerie Fine 2020” ny tantely lodsia avy eto Madagasikara. Ny magazina matihanina “Le Monde de l'Épicerie Fine”, no nanatontosa ny fifaninanana iraisam-pirenena ny alatsinainy 19 oktobra lasa teo, tao amin'ny Hotel Fauchon, Place de la Madeleine any Paris. Sefo, mpivarotra ary mpanao gazety no mpitsara tamin’izany. Mendrika amin'ny sokajy mamy sy tantely ny tantely lodsia malagasy, izay vokatry ny asa mafy nandritry ny telo taona sy ny finiavana handray anjara mba hisian'ny modely ara-toekarena sy sosialy vaovao ho an'ny fampandrosoana ny ambanivohitra eto Madagasikara.
Sary sy fanadihadiana nomena
Tsy nitsahatra nitotongana ny MGA na Ariary tao anatin'ny volana vitsy izay, somary niatsara kely izy faran'ny volana oktobra, raha 4545.29 Ariary ny 1 euro, ary 3897.25 ariary kosa ny 1 dolara amerikanina ny 30 oktobra lasa teo. Isaorana ny namana nanao fanadihadiana momba ity sandam-bola ity, na ny sary ny fanadihadiana: "Raha jerena ny Analyse Graphique EUR & MGA (Euro, mifanehatra amin'ny Vola Malagasy): Ny taha ambany indrindra tamin'ity taona ity dia tamin'ny herinandro 17 febroary 2020, ary ny taha ambony indrindra kosa dia tamin'iny herin'andro ny 19 oktobra 2020 lasa teo.
Faritra Atsinanana: Hatolotra tsy ho ela ny PRD
Fanamby napetraky ny ekipan’ny Faritra Atsinanana tarihin’ny Governora RAFIDISON Richard Théodore, ny hanana Drafitra vaovao hoenti-mamaritra ireo vina rehetra kinendry. Efa amin’ny dingana famaranana ny fandrafetana an’ity PRD na Plan Régional de Développement ny ekipan’ny CONFORME. Natao ny 27 Oktobra tao amin'ny Espace Moiu-Miou, ka nanasana ireo hery velona rehetra eto Toamasina sy amin'ny faritra, ny Atrik’asa fakan-kevitra farany alohan’ny hanolorana izany PRD izany mba hiomanan’ny Faritra Atsinanana amin’ny taom-piasàna 2021 ka hatramin’ny 2023. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 28 octobre 2020 15:14
Transport Aérien : Des pilotes de ligne d’Air Madagascar mis à disposition de l’ACM
Un protocole d’accord portant sur la mise à disposition de pilotes de ligne instructeurs/superviseurs a été signé entre l’Aviation Civile de Madagascar (ACM) et la compagnie nationale Air Madagascar, ceci afin de faciliter et d’améliorer la gestion des ressources et des compétences. En effet, la réalisation des missions de l’Organisme de Contrôle en Vol au sein de l’ACM requiert des compétences en instruction et en supervision. Air Madagascar a accepté sans la moindre difficulté de coopérer avec l’Autorité de l’Aviation Civile en mettant à sa disposition à mi-temps ces pilotes.
dimanche, 25 octobre 2020 18:17
Banky Foibe: Mampatsiahy fa ny Ariary no amaritana ny vidin'entana sy ireo fifanarahana ara-barotra
Na entana amidy, na hofan-trano, na fifanarahana ara-barotra manerana ny Nosy, dia ny Ariary no ampiasaina sy atao hita mason'ny mpanjifa. Mijanona ho singa manokana ireo fepetra eken'ny lalàna ho an'ireo orinasa afakaba sy ireo vahiny tsongaina nomen'ny lalàna alalana hampiasa ny sandam-bola vahiny amin'ny fifampivarotana.